Lọ akụ na-akwado okpomoku zuru ụwa ọnụ | Martech Zone
Emelitere 8 / 9 / 2007: Amaghị ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe ọ bụla metụtara m blog post, mana Sky Financial ugbu a weghachiri $ 1.75.
Ozi m akụ, Ego Sky:
Na 8/3/2007 agara m na ATM nke Smith Valley na County Line ATM nke US31 ma ATM abụọ anaghị arụ ọrụ. M ga-enwe obi ụtọ iwepụ nke 08-03-2007 Foreign ATM US Service FEE $ 1.75 na akaụntụ m. Enweghị m ihe ọzọ m ga-eme ma ọ bụghị ịga na ATM nke ụlọ akụ ọzọ.
Nzaghachi si Sky Bank:
O di nwute na anyi agaghi enwe ike iweghachi ego oru eji eji igwe ndọrọ ego. Onwere ebe ise di iche na mpaghara okpokoro 5 n'ime Greenwood. Maka inwekwu mkparịta ụka n'okwu a, ị nwere ike ịgwa onye njikwa gị Greenwood Financial Center.
Ọzọkwa na njikọ na-abịa abịa na Huntington Bank ị nwere ike iji igwe ATM Hunington ọ bụla na-enweghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. E nwere igwe ndọrọ ego dị otu puku na narị anọ n'etiti igwe igwe na nke ị nwere ike iji.
Daalụ maka ụlọ akụ na Sky Bank.
Nke a bụ ya mere m ji kpọọ ụlọ akụ asị na ihe kpatara mkparịta ụka ahụ:
Ekelela m maka ichekwa ego na Sky Bank. Agbalịrị m ugboro abụọ iji ụlọ akụ Sky Bank zụta ma ATM gị dara.
Yabụ ị na-atụ anya n'ụzọ zuru ezu ka m gaa n'ihu na-anya site na ATM gaa ATM ruo mgbe m hụrụ otu nke na-arụ ọrụ?
M kwesịrị inwe obi ụtọ na a ga-enwe 1,400 ọzọ ATMs nke nwere ike ọgaghị adị?
Ọ bụrụ na ị hụla ụgwọ ole m jidere ụmụ okorobịa a, ị ga-akpagbu. Eziokwu ahụ bụ na ha agaghị agọpụ ihe dị mfe $ 1.75 bụ ihe nzuzu. Enwere m olileanya na ndị ahịa ndị ahịa niile na-agbadata na mmakọ ahụ.
Nke a bụ ọnọdụ ise… dabara adaba, ọ bụ?
Chaị! O wutere gi nke ukwuu.
O di ka i kwuola ugwo
nke ụgwọ. Site n'ihe m gụrụ
ị bụ nnukwu ike na blogger
ụwa. Ha nwere ike na-akpọ gị
Ee, ha mere ka m laa! Enweghị m iwe iwe ruo mgbe m gụrụ azịza ahụ! Achọrọ m ijide n'aka na ha nwetara $ 1.75 uru na nke a. 🙂
Aug 7, 2007 na 2:10 PM
'Ve ga-eso ụlọ akụ dị n'ịntanetị. Mụ na ụlọ akụ Everbank maka afọ 8 gara aga. Ha na-akwụghachi m $ 6 / mo na ụgwọ ATM. Ha na-enyefe akwụkwọ nzipu ozi a na-akwụ ụgwọ iji ziga akwụkwọ azụmahịa dị na ya.
Everbank na-enyekwa ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ dị ukwuu nke ọtụtụ ụlọ akụ nwere ike imetụ.
Enweghị m ike ikwenye mmadụ ole ka na-eji brik na ngwa agha. Aghọtaghị m isi ihe ahụ.
Aug 7, 2007 na 3:15 PM
Naanị iji mee ka obi dị gị mma - ee, ọ bụghị.
M ga-asị na ọ bụ oge akụ ọhụrụ, mana ọnọdụ ahụ agaghị emeziwanye. Nanị ihe ị ga-eme bụ ịgwa onye na-elekọta akụ na mpaghara gị okwu.
Re 1400 ATMs - nke ahụ bụ 1400 n’etiti ụlọ akụ abụọ ahụ, ọ bụghị nke ọhụrụ 1400, wee gbasaa n’agbata steeti ole? Ma, ị hụtụla igwe ndọrọ ego Huningdon ebe ị bi? Ahụtụbeghị m ebe a.
Ihe ndekọ ego nke onwe m dị na Sky, kwa. Ereela ya ugboro atọ ma ọ bụ anọ kemgbe m bịara ebe ahụ. Enwebeghị m nsogbu, mana anaghị m eji igwe ndọrọ ego.
Aug 7, 2007 na 10:36 PM
Echere m na ihe na-enye nsogbu bụ oke ọnụ ahịa ụgwọ ọrụ. $ 1.50 na $ 1.75 kwa azụmahịa? Ọ dị mma, ịkwesịrị ịdọrọ opekempe nke $ 100 n'otu oge iji nweta ọkpọ ahụ na-eru 1%!
N'ebe a na Canada anyị nwere ụlọ akụ ole na ole dị mma, agbanyeghị, ATMs pere mpe na akụ ọ bụla na ọtụtụ ATM nọọrọ onwe ha na-apụta ebe niile. Ole na ole ATM na ndi nwe onwe ha = ego ndi ozo…
Ahụrụ m onwe m na-asị "EE!" ịkwụ ụgwọ-azụ mgbe a jụrụ ya n'oge ndenye ọpụpụ na ụlọ ahịa - enweghị ọrụ nzuzu service. Kedu ihe bụ heck na 'ụgwọ ọrụ' n'agbanyeghị? Ọ bụ ụgwọ ỌRV. Banklọ akụ m na-ebo m ebubo maka ọrụ - ọ bụ naanị na m ejighị n'aka na ihe m nwetara maka ya…
Banks na ekwentị ụlọ ọrụ - na bane nke m adị.
Aug 8, 2007 na 7:18 PM
Ofdị ihe ọchị… Echere m na m ka nwere akaụntụ Royal Bank nke Canada n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na emechighị ya maka ụgwọ (nke ọ nwere ike ịbụ)… onye ma, enwere ike m nde mmadụ! Karịsịa ugbu a na loony na-eto eto ike karịa anyị Akon!
Amen na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ekwentị. Ọ dị ka okenye ị bụ ụlọ ọrụ, ọ ga-akawanye njọ n'ilekọta ndị ahịa! Tụfuo ụgbọ elu ebe ahụ.
Aug 8, 2007 na 7:20 PM
@Rick: Abụ m nnukwu ụlọ akụ n'ịntanetị, Rick. Echere m na ọ bụ ya mere m ji nwee mmiri na nke a. Ọbụna m mepere akaụntụ m n'ịntanetị! Nke ahụ anaghị efu ha otu narị maka ijikwa azụmaahịa m.
@Randy: Ọ dị mma ịnụ na ha na-agwọ gị nke ọma, Randy! M ga-emeghe akaụntụ na ha.
Ọ bụ ike nke blog? Banklọ akụ m kwụghachiri $ 1.75 taa.
Aug 14, 2007 na 5:27 PM
Kedu ka ị ga - esi kwuo okwu ị na - atụ anya na ndị ahịa ndị ahịa niile ga - agbadata n'ihi njikọta ??? Ya maara, enwere ọtụtụ n'ime anyị na-arụ ọrụ ebe ahụ nke ga-ahụ n'anya ịnye gị niile ụgwọ gị mana anyị enweghị ikike ịme ya. E nwere ọtụtụ narị mmadụ ga-efunahụ ọrụ ha. Ọtụtụ narị ụmụaka whos si ebi ndụ ha na-eji ga-agbanwe n'ụzọ dị egwu. Ya mere dont na-ekwu okwu dị ka nke ahụ n'ihi na ị gaghị enweta obere nzuzu $ 1.75 ego na ị laghachiri n'ụzọ ọ bụla maka obere ebe nrụọrụ weebụ gị. Ya abụghị ndị ahịa ọrụ kpatara na-ebo gị ebubo ma ọ bụ na ọ bụghị ha kpatara ya enwetaghị nkwụghachi na mbụ. Ihe i mere iji weghachi ya dị mma mana okwu nkwu ndị i kwuru bụ maka ndị mmadụ na-ezighi ezi. Enwere m ike igosi gị na ọ bụrụ na ị gwa onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ahụ ọrụ ha ga-agwa gị na ha ga-ahụ n'anya ịnyeghachi gị ụgwọ gị. Ya mere, tupu ị na-ekwu okwu banyere ndị mmadụ, mara eziokwu gị tupu ị gwepịa ndị mmadụ karịa ihe ụlọ ọrụ na-echila ha ọnụ. Imirikiti ndị mmadụ na-efunahụ ọrụ ha anọwo ebe ahụ kemgbe ọtụtụ afọ ma ọ bụghị kpatara ha na a gbara gị ụgwọ nke ụfọdụ ndị na-akụ akụ nde kwuru ka ha kwụọ ụgwọ ka o wee baa ọgaranya. Ihe ikwesiri ikwu bụ na ị na-atụ anya na ndị na-eme iwu ga-akwụsị ọrụ. A naghị akwụ anyị ụgwọ ọbụla ma were nnukwu mmetọ, okwu gị bụ obere mmegbu. Kedu ka ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na mmadụ agwa gị echi na ị nweghị ọrụ ọzọ? Ma ọ bụ ọ bụrụ na a gwa onye ezinụlọ gị na ụlọ ọrụ ọzọ na-ewere nke ha ma na a gaghị achọzi ha? Nke ahụ siri ike ịkụ. Ya mere dont na-ekwu banyere ihe ị na-eche, mụta eziokwu tupu ị kpebie na ị ga-achọ ka anyị niile pụọ n'ọrụ.
Aug 14, 2007 na 8:36 PM
Nanị ụzọ ụlọ ọrụ na-agbanwe si n'ime. Ọ bụrụ na nnukwu ndị ọrụ ahapụ ajọ ndị were ha n'ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọjọọ, ọ ga-akụziri ụlọ ọrụ ahụ ihe.
Ọ bụrụ n 'ịchọrọ ime ihe gbasara ya ma kwenye na ọ bụ ezighi ezi, mgbe ahụ ịkwesịrị ịhapụ kama ịkwado nzukọ dị otú a.
Know mara ma amaara m na Sky Bank (na aha ndị gara aga) na-eme nnukwu ego nke ndị ogbenye na-akwụ ụgwọ na iwu. Ọ kwesịrị mpụ be ma ọ bụrụhaala na ha nwere lemmings ime ha bidding, Echere m na ihe agaghị agbanwe.
Hapụ? Nke ahụ dị mfe karịa ikwu karịa ịme mgbe ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị m ebe m bi. Enweghị ọrụ ọ bụla ebe ahụ na enweghị iwu / usoro nke onye ọ bụla ga-ekwenye na ya. Naanị n'ihi na ị na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-ezughị oke ọ naghị eme gị ajọ mmadụ. Na Ọrụ Ndị Ahịa enweghị ihe jikọrọ ya na $ 1.75 gị. Anyị emeghị ego ahụ. Ekwenyere m na anyị niile na-akwụ ụgwọ nzuzu ahụ. Ma m ga-agwa ya, ọtụtụ ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ ya. Imirikiti ụlọ akụ na-akwụ gị ụgwọ iji debit gị n'ụlọ ahịa. SKY anaghị adị, agbanyeghị Huntington na-eme. Yabụ ịhụ, enwere ọtụtụ atumatu na-a suụ na nke na ebe ọ bụla ị na-aga. Ekwenyesiri m ike na onye na-arụ ọrụ na Walmart nwere ike ịgwa gị gbasara ihe na-eme nzuzu n'ebe ahụ. Odi m ka ichoro ihe kariri ime gi oge karia ichegbu onwe gi banyere $ 1.75 ma wee chigharia ma choo ihe nile nke ihe kariri 100 ka ha buru ndi n’enweghi oru na uzo a na-achoghi ka unu na-acho ụtụ isi !!!!
Enwere m ike ịnweta ohere m na ụtụ isi. Ọ dịkarịa ala ụtụ isi na-anwa ịha nhatanha n'ofe ego (n'ezie, ha na-ata ndị ọgaranya ntaramahụhụ). Ego ụlọ akụ na-ata ahụhụ nke etiti na nke obere.
Ọ dị ka ị bụ ezigbo onye ọrụ na-eche maka ndị ahịa gị. Enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe ka mma! M na-eme n'ezie.